Ku -beddelidda Garoomada Diyaaradaha fursado bilyan oo Dollar ah oo kaash ah magaalooyinka Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Ku -beddelidda Garoomada Diyaaradaha fursado bilyan oo Dollar ah oo kaash ah magaalooyinka Mareykanka
Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • News • Gaadiidka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Faafida COVID-19 waxay ku abuurtay culays maaliyadeed oo cusub qaar ka mid ah dawladaha hoose iyo dawladaha hoose. Hal qalab oo ka caawin kara inay la qabsadaan waxaa la yiraahdaa "ka -faa'iideysiga hantida," oo mararka qaarkood loo yaqaan "dib -u -warshadaynta hantida kaabayaasha." Sida ay ku dhaqmaan Australia iyo in yar oo ka mid ah awoodaha Mareykanka, fikradda ayaa ah in dowladdu ay iibiso ama kirayso hantida dakhli soo saarta, iyadoo la furayo qiimayaashooda hantida si loogu isticmaalo ujeeddooyin kale oo dadweyne oo mudnaan sare leh.
Iyada oo ku saleysan xogta iibkii madaarka hore iyo kiraynta muddada fog ee adduunka, daraasad ayaa muujineysa in kaliya Hawaii ee labada garoon ee ugu waaweyn ay noqon karaan qiimahoodu yahay $ 3.6 bilyan oo la isku daray iyada oo loo sii kiraynayo shirkado madaar oo gaar loo leeyahay iyo maalgashadayaal, sida DHACDO fama tusaale.
Daraasaddu waxay ogaatay in Hawaii oo keliya Honolulu Daniel K. Inouye International Airport ay ka soo saari karto $ 2.7 bilyan halka Kahului Airport ee Maui uu ku heli karo 935 milyan oo doollar muddo dheer.
Si kastaba ha ahaatee, garoomada diyaaradaha waxaa lagu leeyahay deyn ka badan $ 2.5 bilyan. Ka dib markii la bixiyay dammaanadihii garoonka diyaaradaha ee gobolka, sida uu farayo sharciga federaaliga oo qayb ka ah heshiis kasta oo kiro ah, saafiga gobolka ayaa ka soo baxa kiraynta muddada dheer ee labada garoon diyaaradeed waxay wadar ahaan noqon doontaa $ 1.1 bilyan.
Sida uu dhigayo xeerarka madaarka dawladda dhexe ee Maraykanka, milkiilayaasha garoomada dawliga ah looma oggola inay helaan mid ka mid ah dakhliga saafiga ah ee madaarka; dhammaan dakhligaas oo kale waa in lagu hayaa madaarka oo loo isticmaalo ujeedooyin madaar. Dibadda, ma jiraan wax xaddidaad ah. 30 -kii sano ee la soo dhaafay, dawlado badan ayaa madaamadaha garoomada waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah iska leh ama si gaar ah u qaatay waxayna ka heleen faa'iidooyin maaliyadeed toos ah.
Sannadkii 2018, iyada oo qayb ka ah sharciga dib-u-oggolaanshaha Maamulka Duulista Federaalka, Koongarasku wuxuu abuuray ka-reebitaan muhiim u ah xaddidaadda muddada dheer jirtay. Barnaamijka Iskaashiga Maal-gashiga Madaarka ee cusub (AIPP) wuxuu u saamaxayaa milkiilayaasha madaarka dawladda inay galaan heshiisyada muddada dheer ee iskaashiga dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay (P3) —waxayna u isticmaalaan kiraynta saafiga ah ujeeddooyin guud oo dawladeed.
Daraasadani waxay sahaminaysaa suurtagalnimada kiraynta iskaashiga dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee 31 garoon diyaaradeed oo waaweyn iyo kuwo dhexe oo ay leeyihiin magaalada, gobolka, iyo dawlad-goboleedyada. Waxay ka helaysaa xog laga helay daraasiin ka mid ah garoomada dibedda ee iskaashatada dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay heshiisyada kiraynta sannadihii u dambeeyay si loo qiyaaso waxa mid kasta oo ka mid ah 31-ka madaar ay u qalmi karaan maalgashadayaasha.
Qiimaynta guud waa waxa laga yaabo in madaarku ku qiimeeyo suuqa adduunka. Qiimaynta saafiga ah waxay tixgelinaysaa bixinta xeerka canshuuraha ee Maraykanka oo u baahan in curaarta gegida dayuuradaha ee jira la bixiyo haddii ay dhacdo in la beddelo xakamaynta, sida heshiis kiro oo muddo dheer ah. Sidaa darteed, qiyaasta qiimaha saafiga ahi waa qiimaha guud ee laga jaray qiimaha curaarta madaarka.
Maaddaama kiraynta P3 ee garoomada diyaaradaha ay tahay wax aan caadi ahayn Mareykanka (tusaalaha kaliya ee jira waa San Juan, Puerto Rico airport), daraasaddu waxay sharraxaysaa saddex qaybood oo laga yaabo inay maalgashadayaasha garoomada diyaaradaha Mareykanka.
Marka hore waa koboca sii kordhaya ee shirkadaha diyaaradaha ee caalamiga ah, oo ay ku jiraan shanta kooxood ee madaarka ugu waaweyn, kuwaas oo ku shaqeeya saamiga sii kordhaya ee garoomada diyaaradaha adduunka ugu weyn dakhli sanadeedka.
Midda labaad waa maalgelin badan oo kaabayaasha kaabayaasha dhaqaalaha ah, taasoo kor u qaadday boqollaal bilyan oo doollar si loogu maalgashado sida kaabayaasha kaabayaasha gaarka loo leeyahay iyo kuwa P3 kiraystay ee adduunka oo dhan.
Qaybta saddexaad waa miisaaniyadda hawlgabka dadweynaha, kuwaas oo si tartiib tartiib ah u ballaarinaya maalgashigooda ku aaddan kaabayaasha si loogu noqdo hoos -u -dhac ku yimid heerka guud ee soo -noqoshada maalgashiyada.
Dhammaan saddexda nooc ee maal -gashadayaashu waxay leeyihiin aragti dheer waxayna ku raaxaystaan ​​inay maal -gashadaan oo sii horumariyaan hantida noocan ah.